Milicsiga Wargeyska Mudane Madaxweyne; Cudurkii Fardaha Galay Ma Dameeraad Ka Gubtay? | Burconews
Milicsiga Wargeyska Mudane Madaxweyne; Cudurkii Fardaha Galay Ma Dameeraad Ka Gubtay?
Shalay, Madaxweyne Biixi waxa uu isku shaandhayn ku sameeyey qaar ka mid ah xubnaha golihiisa wasiirada iyo agaasimayaasha guudee wasaaradaha.
Hase yeeshe ee, sidaas ma’ay noqon oo natiijada isku shaandhaynta uu Madaxweyne Biixi sameeyay, waxa ay shacabku kaga falceliyeen dareen isku mid u badan oo laga dareemay baraha bulshadu ku xidhiidho iyo madalaha dadka siyaasadda gorfeeya iyo aqoonyahanku isugu yimaaddaan badankooda. Hal-qabsiga u muuqday in uu isticmaalka dadka ugu badnaa shalayna waxa uu noqday”Hadduu sii go’ay”.